Laptop အသုံးပြူသူများ သတိထားရန် | အိမ့်မှူးသော်
လူအများစုက လက်တော.ပ်ကို ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုဖို.လို. ယုံကြည်ထားကြပေမယ်. ကုမ္မဏီကြီးတွေ ဖြစ်တဲ. Apple, Hewlett Packard and Dell စတဲ. ကုမ္မဏီတွေကတော. လက်တော.ကို ပေါင်ပေါ်မတင်ဖို. သတိပေးခဲ.ကြတယ်။
လက်တော.ပ် ကို ကြာရှည်စွာ ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုခြင်းကြောင်. ရှားပါးတဲ. Toasted Skin ရောဂါလက္ခဏာစုကို ရစေနိုင်ကြောင်း မကြာသေးမီက ၁၂နှစ်သားအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ၅၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ် အပူထုတ်လွတ်တဲ. လက်တော.ကို လအတန်ကြာ. ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ဂိမ်းကစားခဲ.ရာမှ Toasted Skin Syndrome ရရှိခဲ.ကြောင်း Pediatrics Medical Journal မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၄င်းရောဂါဟာ လက်တော.ပ် ကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုတဲ.အခါ ထွက်ပေါ်လာတဲ. အပူ ရှိန်ကြောင်. နေလောင် သကဲ.သို. အညိုရောင် အကွက်လေးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ အန္တရာယ်မရှိပေမယ်. Permanent skin darkening အရေအပြားအရောင်ကို ပျက်စီးစေပြီး အရေအပြားကင်ဆာ ကိုလည်းဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
Toasted Skin Syndrome ဟာ မုန်.ဖုတ်သူ ၊ မီးဖိုနားမှာအလုပ်လုပ်ရသူ၊ မီးအပူနဲ. နီးနီးကပ်ကပ် အလုပ်လုပ်ရတဲ. အလုပ်သမားတွေမှာ အများဆုံးတွေ.ရနိုင်ပါတယ် ။
လက်တော.ပ်ကို ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အသုံးပြုတဲ. အမျိုးသားတွေကလည်း လက်တော.ကနေ ထွက်လာတဲ.အပူရှိန်ကြောင်. ဝှေးစေ.မှ သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းစေပြီး ၊ မျိုးကန်းစေ နိုင်တဲ.ထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း အနောက် တိုင်းဆေးပညာကလွန်ခဲ.တဲ. နှစ်တွေက ဖော်ပြ ခဲ.ပါတယ်။ မည်သည်.လက်တော.ပ် အမျိုးအစားက ထိုသို.ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကိုတော. မသတ်မှတ် ရသေးပါဘူးလို.လည်းဆိုပါတယ်။